Soomaalida Maraykanka & Prof. Samatar. | Qaranimo Online
Soomaalida Maraykanka & Prof. Samatar.
September 7, 2012 | Filed under: Opinion / Fikrad | Posted by: QOL Admin OPINION - FIKRAD – Soomaalida Maraykanka oo dhaliishay Prof. Axmed Samatar. Sababtu waa maxay?
Somalida Maraykanka ku nool iyo ina Samatar maxaa kala haysta?
Ha loo garnaqoo!.
Tan iyo markii uu Prof. Ahmed Samatar ku kacay khaldkii weynaa (big blunder) ee uu ka yiri Raadiyaha dadweynaha ee American Public Radio duhur cad Somalida Maraykanka waajibkoodii marakaykannimo kama soo bixin xaqiiqadii ciyaalkii la waayayna kama xog waramin waxayna ku sii jeedaan Somaliya warqadaha dhalashada maraykankana waxay u qaateen oo keliya inay danahooda ku gaaraan ee daacadnimo kama aha arrintaas waxaa ay noqotay mid lagaga sheekayso ama laga doodo sabata ku kaliftay prof. Samatar inuu sidaas raadiyaha publiga ka sheego. Halkan ka aqriso:
Haddaba waxaan isku dayay inaan khadka telefoonka ku weydiiyo Somalida Maraykanka waxa ay arrintaas ka qabaan ama sida ay u arkaan Prof. Samatar. Somalidan waxaa ay isugu jireen kuwo leh haloo dulqaato iyo kuwo xanaaqsan. Waxaa ugu horeyntii la xiriiray gabar arday ka ah Jaamacadda Minnesota dhigata oo la yiraahdo Huda waxayna tiri “ Waa ayaan darro weyn in Prof. Samatar sidaas yiraahdo. Annaka generationkeena Soomaaliya ma arag mana naqaan siyaadeedana ma fahmi karno. Malaha Profesorka asaga aad ugu mashquulsan siyaasadda Soomaalida oo aan danaynay halkan laakiin anaga nooma hadli karo malaha dadka waaweyn ayuu u hadlayey,malaha sidiisoo kale ayuu na mooday”
Mama Fadumo oo dukaan dhar ah ku leh Minneapolis ayaa tiri ayadoo aad u xanaaqsan. Horta Somalida kii waxbartaa baa kaba daran kuweena aan waxbaran. Ayaan Xirsi ayaan ogeyne ma hadduu ina Samatarna yiri Somalida daacad uma aha maraykanka warqadaha sharcigana waxay u qaateen dankale waryaa naga aamusiiya aqoontooda ha ba’dee.
Mahad Ali oo degan Ohio ayaa igu yiri Ina Samatar waxaan aqiinay mudo dheer dadka uunbaa hadda baranayaa ee weligeen waan niqiinay inuu yahay nin kibir badan oo aan ixtiraam lahayn oo ay ka suurowdo inuu Somalida cambaareeyo jecelna in keligii la jeclaado inta kalena aan la aaminin waxaa uu ku fiican yahay heesha iyo macalinimo laakiin madaxweynenimo kuma fiicna. Waa warlord meel qalad ah jooga waayo warlords waxay joogaan baarlamaanka Xamar ee Jaamacadaha ma joogaan laakiin waxaan maqlay hadda ayuu ku biiray bahdiisii dagaalka qaylada iyo rabshada iyo buuqa.
Caasha Axmed oo degan Washington DC waxay tiri waan maqalnay in Prof. Axmed Samatar hadal ka dhacay oo qalad ah laakiin waa nin wanaagsan. Qofwalba waa qaldamaa in la iska daba qaatona maahan waana iman doontaa in uu waqti munaasib ah Somalida Marankanka raligelin siiyo. Axmed Samatar waa nin u taagan midnimada Somaliya nin laaluush qaatana maahan nin dalka iibsanaya maahan, haddii uu madaxweyne noqdo dalka waxba uma dhibayo. Haddii uu isla weyn yahay weligeed ayuu nin aqoon leh ama maalqabeen ah islaweynaan jirey ama dadka iskala fiicnaa, nin aan islaweynayn waa doqon daciif ah, kartida ayay ka mid tahay in la islaweynaado. Waxaan u baahanahay qof geesi ah oo dagaal yahan ah oo weliba arrogant ah, kuwa masayrsan wax ha bartaan markaas ayay isla weyni gaari doonaane. Polite waa dhaqan reer galbeed Samatar waa Soomaali polite ma ubaahna waa inuu nin rag ah oo wax iska dhiciyaa noqdaa.
Jama Dheere oo jooga Chicago Illinois waxaa uu yiri. Prof Samatar madaxweyne uma socdo wasiir ayuu shaxaadayaa laakiin xataa wasiir ma helayo waayo waa nin aan dabeecad lahayn oo aanan fahmi karin Somalida iyo beesha Caalamkaba. Baarlamaanka cusub waxaa ka buuxa dad wax bartay waana yaqaanaan inuu Axmed Samatar muranlow controversial ah yahay Waqtigii uu Yayuf Garaad BBC reer muqdishu kaga gedi jirey Ina Samatar waa la soo dhaafay.. Axmed Samatar Somalida maraykanka ayuu ka xanaajiyey mar uu wada eedeeyo iyo maruu xaflado ka qashqashaado sida ciyaala suuqa. Axmed Samatar dooro waaa Faroole dooro ma yaqaanaan sida wanaagsan ee dadka loola hadlo qaamuuskooda kuma jirto ereyadan oo ah shuruudda siyaasinimada.(humble, respect, speak nicely, apology, they have no class). Jama Dheere hadalkiisii waxaa uu ku soo gebo gebeeyey Samatar siyasadda maraykanka waa looga hormaray oo dad Somali ah baa galay asagan waa uu geli waayey haddana tii Soomaliya ayuu ku wareersan yahay. Waxaa ka horeeya macalimiin waayo arag ah sida Caddow iyo Sheekh Shariif. Geedi Faarax oo dhowaan ka qalin jebin raba Jaamacad lagu barto siyaasadda ee Seattle waxaa uu yiri Prof. Samatar uma soo diyaar garoobin inuu u tartamo madaxweynnino Arrintaas waxay u baahan tahay marka hore inaad is ilaaliso oo aadan cadaw badan samaysan, inaad taqaano sida wanaagsan ee dadka loola hadlo inaad raaligeliso dhamaan dadkii aad hore uga soo xanaajisay sida Somalida Maraykanka iyo inaad barato siyaasadda..
Ali Gurey oo ah aqoon yahan Somali ah oo degan California bartayna cilmunafsi (psychology) ayaa sharxay habdhaqanka dadka sida Faroole iyo Prof. Samatar ee aanan garanayn sida wanaagsan ee dadka loola hadlo ama ay ka muuqato inay xanaaqsan yihiin iyo isla weynin aan xikmad ku dhisnayn. Aqoon yahan Ali waxaa uu yiri” horta dadka noocaas ah kalsooni ayaa ka maqan waayo qofka isku kalsoon naftiisa ayuu ixtiraamaa dadka kale waa uu ixtiraamaa, waxaa kale oo jira in aanay awoodin inay raaligelin baxshaan waayo raaligeinta waxay u haystaan calaamad daciifnimo ah Dadka noocaas ah shaqooyin qarin kara ayaa jira laakiin siyaasadda ma qarin karto waa la ogaanayaa ayagaana is fashilinayaan waayo siyaasigy waxaa laga rabaa inuu humble noqdo dadkana u adeego.
Ugu danbayntii Nabadoon Xassan Allaale Rabiile oo ah oday ay isku beel yihiin Axmed Samatar oo degan maraykanka ayaa yiri horta hadalka ka soo yeedhay Prof. Samatar Somalida Maraykanka iyo umadda Soomaaliyeed ba raaligelin haddii uu siin waayo annagaa siin doona iyo weliba xaal laakiin waxaan Somalida u sheegayaa beel walba waa leedahay kuwo ku sifoobay waxa aad ku eedeynaysaan Ina Samatar ee ah af lagaado, islaweynin hadal qadhaadh iyo rabshad ciyaalo suuq. maxaase xilligan tiisa ka dhigtay mid lagu mashquulo xilli uu doorasho ku jiro haddii aanay arrintu ahayn siyaasad iyo qabiili? Annagu waxaan tuhun sanahay in dagaalka warbaahinta ee lagu hayo Musharaxa Madaxweyne Prof. Samatar in ay ka danbeeyaan kuwa la tartamaya oo ka baqaya inuu ka qaado doorashada waayo kuwa ka dabeecad xun oo ka ciyaala suuqsan ayaa ordaya waxbana lagama sheego waxaan tuhunsanahay Caddow iyo Shiikh Shariif dadkooda. Somalida Maraykanka Waxaan u sheegeynaa in aan idin dhaafinay oo aan Prof. Axmed Samatar ka dhignay xildhibaan oo aan xamar u dirnay si uu umadda ugu adeego mardanbe idinma weerari doono ee idinkana iska cafiya. Somalida Maraykankow waanu xaali doonaa ee bal doorashada noo suga.
Si kastaba ha ahaatee doodan waxay u faaiideynaysaa dhalinyarada Soomaalida ee mustaqbalka geli doona siyaasadda waxayna u noqon doontaa cashar muhiim ah. Waxaa la yiri Obama inuu madaxweyne noqdo waxaa uu u diyaar garoobayey ilaa xilligii uu yaraa aad ayuu isu ilaalin jirey sidaas ayaa qaladaad looga waayey. Xirfadda siyaasadda 101 waxaa u horeeya inaad dadka u muujiso humble nimo iyo hadal wanaagsan oo aad dadka kula hadasho si aad u soo jiidato, waxaa ku xiga inaad waqti dheer diyaar garowdo oo aad dhaqankaaga waxa ka qaldan saxdo iyo ugu danbayntii waxaa lagaa rabaa in aad yarayso dagaalada iyo aflagaadada waayo waxay arrimahaasi badinayaan cadowgaaga. Ma taqaanind cidda ku chalange garayn doonto waxaa ku jiri kara kuwa aftahan ah ama wax qori yaqaan. Ugu danbayn siyaasi waxaa la raaciyey dad waa inaad barataa xirfadda fahamka dadka iyo sida loo kasbado.
Prof. Geedi Yabaroow Yalaxoow - geediyalaxoow@yahoo.com
Other Interesting posts:Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka ...Arimaha Dastuurka, Khilaafyada Jira iyo Dib u Dhac...Open Letter to Amb. Augustine Mahiga-UN...Foolal cusub iyo Faro caddaanaShariif Waa Xaraarug!C/weli dooro waa Faroole dooro - Part IIMadaxweeyne Xassan ma badbaadin doona Puntland?Qudbadii Madaxweynaha –War weyn baa ku qarsoonaa...Somalia Conference and Rivalry of Civilizations Fashilka Muqdisho RW. C/weli mise Gud. Muungaab?Gacantaad GABRE ku SALAANTAY ha kaa GO’DO! Q-1aadQorshaha Gabre iyo Geedi ee Hiiraan iyo Shabeellad...Socialize	Posted by QOL Admin on September 7, 2012. Filed under Opinion / Fikrad.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.	One Response to Soomaalida Maraykanka & Prof. Samatar.	Guulwade September 8, 2012 - 6:24 pm	Hadda ma waxaad leedihiin waxaan waxaa soo qoray nin jaamacad dhiga?
Waan la yaabay runtii. Waxaa loo bahan yahay aqoonyahanno dhiga aqoon laga kororsado.